Horumarka dhaqaale ee Norway | Safarka Absolut
Noorway, oo ay ku nool yihiin 4,6 milyan oo qof oo ku nool woqooyiga Yurub, ayaa maanta ka mid ah dalalka adduunka ugu qanisan. Ku Kobcinta dhaqaalaha Norway waxay ka muuqataa GDP qofkiiba iyo raasumaalka bulshada. Intaas waxaa sii dheer, Norway waxay si joogto ah uga muuqataa meesha ugu sarreysa Heerka Horumarinta Aadanaha ee Qaramada Midoobay.
Sideed u sharaxaysaa guushan? Furaha wuxuu kujiraa keydka balaaran ee ilaha dabiiciga ah oo uu wadanku leeyahay. Laakiin taasi kuma filna. Jiritaanka a shaqaale xirfad leh iyo dadaalka la qabsiga teknooloojiyada cusub.
La Taariikhda dhaqaalaha Norwey Waxaa loo kala saari karaa laba waji oo waaweyn: ka hor iyo kadib xorriyadda dalka 1814.
1 Gobanimada ka hor
2 Horumarka dhaqaale ee Noorway qarnigii XNUMXaad
3 Qalalaasaha iyo koritaanka
4 Dhaqaalaha Norway maanta
Gobanimada ka hor
Dhaqaalaha Norwey taariikh ahaan wuxuu ku salaysnaa soo-saarka bulshada beeralayda deegaanka iyo howlaha kale ee dhameystirka ah sida kaluumeysiga, ugaarsiga iyo keymaha. Ganacsiga waxaa sii nooleeyay markab ganacsi oo weligiis koraya.
Kalluumeysiga ayaa weli door muhiim ah ka ciyaara dhaqaalaha Norway
Jawiga dhulka iyo xaaladaha cimilada awgood, bulshada woqooyiga iyo galbeedka waxay aad ugu tiirsanaayeen kalluumeysiga iyo ganacsiga shisheeye marka loo eego bulshooyinka ku nool koonfurta iyo bariga, kuwaas oo inta badan ku tiirsanaa beeraha. Waqtigaan xarunta dhaqaale ee ugu weyni waxay ahayd magaalada Bergen.
Horumarka dhaqaale ee Noorway qarnigii XNUMXaad
Goorma, 417 sano ka dib, Norway heshay Gobonimadooda Danmark sanadkii 1814, in kabadan 90% dadka (qiyaastii 800.000 oo qof) ayaa ku noolaa miyiga. Sanadkii 1816 kii Bangiga Dhexe ee Norway waxaana la soo saaray lacag qaran: the khaas ah.
Horumarka dhaqaale ee dhabta ah ee Noorway wuxuu bilaabay inuu qaado talaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad. Ku mahadsanid dhoofinta birta, dhuxusha, qoryaha iyo kalluunka, waddanku wuxuu soo maray horumar ganacsi oo aad u weyn, isagoo ka sarreeyay dalka ay deriska yihiin ee Sweden. Dhinaca kale, soo bandhigida qaabab cusub oo wax-soo-saarka ayaa kordhiyay wax-soo-saarka beeraha waxayna doorbideen horumarinta xoolaha.
Isla mar ahaantaana, Noorway waxay noqotay quwadda qaybta Gaadiidka badda. Maraakiibteeda ayaa wakiil ka ahaa wax aan ka yarayn 7% adduunka marka la isu geeyo 1875. Habka warshadaynta waddanka wuxuu ku dhacay mowjado dhawr ah.
Qalalaasaha iyo koritaanka
La Dagaalkii Koowaad ee Adduunka waxay fadhiid u ahayd horumarka dhaqaale ee Norway. Waddanku wuxuu bixiyay cawaaqib xumada ku-tiirsanaanta dhaqaale ee xad-dhaafka ah ee Boqortooyada Ingiriiska, ka dibna saaxiibkiisa ganacsi ee ugu weyn. Fursado ka maqan dalkooda, noorwiiji badan ayaa u haajiray Ameerika qeybtii hore ee qarnigii XNUMXaad.
Gumeysigii Jarmalka ee dalka 40-yadii ayaa joojiyay isku daygii dib u soo kabashada ee xishoodka badnaa tobankii sano ee la soo dhaafay.
Inta badan barwaaqada Norway waxay ku saleysan tahay saliid
Dagaalkii ka dib, Noorweey waxay wajahday caqabadda ahayd inay dib u dhisto dhaqaalaheeda. Waxay ahayd markaa kadib markii dawladda Norwey ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda bulshada, taas oo ku guuleysatay mahadnaq kadib markii la helay kayd badan saliida iyo gaaska badda woqooyi.
ka sano dahabi ah ee dhaqaalaha Norway waa kuwa soconaya 1950 ilaa 1973. Muddadan GDP-du si aad ah ayuu u kordhay, ganacsiga shisheeyaha waa la dedejiyay, shaqo la'aanta ayaa baaba'day heerka sicir bararkuna wuu xasilloon yahay.
Dhaqaalaha adduunka waxaa gilgiley 1973 kii waxa loogu yeero "Dhibaatada saliida". Caqli ahaan, maadaama ay tahay wadan wax soo saare ah, Norwey saameyn xoogan ayey ku yeelatay. Caqiidada dimuqraadiga ah ee bulshada waxay ahayd in lagu beddelo xalalka xorta ah, oo leh dulsaar badan iyo qiimo dhaca lacagta.
Dhibaatooyinkii dhaqaale ee dabayaaqadii XNUMXaad iyo horraantii qarniyadii XNUMXaad waxay saameeyeen shirkado badan oo reer Norway ah, halka dowladdu la wareegtay inta badan bangiyada ganacsiga ugu waaweyn si looga fogaado wadar ahaan burburka dhaqaale.
Dhaqaalaha Norway maanta
Maanta dalku wuxuu leeyahay dhaqaale adag oo adag. Qeybta saliida ayaa wali ah mid aad muhiim u ah. Waxaa xaqiiqo ah in maaraynta wanaagsan ee kheyraadka dabiiciga ah ee dalka ay ka qeyb qaadatay in Noorweey ka mid noqoto wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan aduunka maanta.
Noorweey waa wadanka ugu horeeya aduunka marka la fiiriyo heerka horumarka aadanaha
Waxyaabaha farqiga u dhexeeya Norway iyo dowladaha kale ee saliidda soo saara waa kuwan soo socda: tababarka shaqaalaha, dhaqanka qaadashada tikniyoolajiyadda horumarsan ee laga helo waddamada kale ee hoggaaminaya, iyo hay'adaha siyaasadeed ee xasilloon.
Arrinta xiisaha lihi waxay tahay in Norway dhowr jeer ay diiday inay qayb ka ahaato Midowga Yurub. Waxay sidoo kale haysaa lacagta waddanka, koronka Norway. Si kastaba ha noqotee, waa loo hoggaansamayaa Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA)
Maanta Norwey waa waddanka lixaad ee adduunka iyo kan labaad ee Yurub ee GDP qofkiiba sida laga soo xigtay xog ka timid Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF). Sidoo kale waa in la ogaadaa in, sida ku xusan qiyaasaha Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay, Noorweey waa wadanka aduunka ugu horeeya ee Tusmada horumarka aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Horumarka dhaqaale ee Norway